10 taona ny minisiteran’ny Rano: nizarana fitaovam-pianarana ny zanaky ny mpiasa | NewsMada
10 taona ny minisiteran’ny Rano: nizarana fitaovam-pianarana ny zanaky ny mpiasa
Manamarika ny 10 taona niorenany ny minisiteran’ny Rano, ny fanadiovana ary fidiovana, amin’ity taona ity. Fizarana fitaovam-pianarana ho an’ny zanaky ny mpiasa ny nanamarihana izany ho fanamaivanana ny vesatry ny vola mivoaka amin’ny isan-tokantrano. Manome lanja betsaka ny maha olona sy ny lafiny sosialy ny mpitantana rehetra ao amin’ny minisitera, araka ny fanazavan’ny minisitra Ravatomanga Roland, tamin’ity herinandro ity, teny Ambohijatovo Ambony. Tsapany tamin’ny zavatra niainany fa rehefa ankaherezina ny mpiasa ary omena vahana ny fifampitsinjovana, tsara hatrany ny vokatra azo amin’ny asa. Nambarany fa misy fahatarana amin’ny fanonerana ny saram-pitsaboan’ny mpiasa fa noho ny ezaka, efa voakarakara hatramin’ny 90% izany ankehitriny.
Tao anatin’ny lahateniny, nizara ny politikan’ny minisitera tantanany ny tenany. Napetraka ho laharam-pahamehana ny fahazoan’ny mponina rano any amin’ny faritra Androy. Hovitaina mialoha ny faran’ny taona ny tetikasa lehibe famatsian-drano izany. Ao anatin’ny fitadiavana ny famatsim-bola hamatsiana ny tetikasa ny tomponandraikitra, araka ny vaovao nampitaina.
Ho an’ny faritra hafa, ny fanadiovana no himasoana amin’ny faritra valo ka tafiditra ao ny Renivohitra, Antsirabe, i Taolagnaro ary i Nosy Be… Ho an’ity tetikasa ity, efa vonona ny vola ary hirosoana tsy ho ela ny fanatanterahana.